Waqti kale oo loo cayimay kulanka Hogaamiyayaasha soomaaliyeed.
Waxaa galabta lagu soo gaba gabeeyay magaaladda kampala ee xarunta wadanka Uganda shir ay halkaasi ku lahaayeen madaxwaynaha dalka Uganda yuweri musaveni iyo wasiirka arimha dibadda ee dalka Kenya kalonzo musyoka.
Kulankaas waxaa uu ahaa mid looga hadlayay xaaladda uu marayo shirka dib uheshiisiinta soomaaliyeed iyo sidii loo dar dar galin galin lahaa geedi socodka shirka dib u heshiinta soomaaliyeed ee ka dhacaya dalka Kenya.
Wasiirka arimaha dibadda ee dalka Uganda Augostino Nshimeya oo galinkii danbe ee manta oo aan kula xiriiray khadka taleefanka isagoo kusugan magaalada kampala ayaa ii xaqiijiyay in kulankaasi uu dhacay galabta isla markaana laga soo saaray go’aano lagu bad baadinayo shirka dib u heshiisiinta soomaaliyeed.
Waxaana ay isla afgarteen in kulanka hogaamiyayaasha loo dib dhigo 9ka bisha January ee sanadka cusub oo ka dhici doona magaaladda Nairobi horayna loogu qorsheeyay in uu ka dhaco magaalada Mombasa ee xeebta.
Maalin ka hor kulanka hogaamiyayaasha ayaa iyadana lagu wadaa in uu Nairobi soo gaaro madaxwayne Yuweri Musaveni ahna gudoomiyaha urur goboleedka IGAD oo la kulmi doona hogaamiyayaasha soomaalida ee Kenya ku sugan.
Dhowr jeweer ayaa dib u dhacyo isdaba jog ah ay ku yimaadeen kulanka hogaamiyayaasha soomaaliyeed loo qorsheeyay ee la xiriira xalinta khilaafka iyo isfahan la’aanta u dhaxaysa hogaamiyayaasha soomaaliyeed ee ku kala sugan Nairobi iyo kuwa jooga dalka soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee shacbka soomaaliyeed oo dawlad la’aan ay hayso mudo 14 sano ah waxaa ay u ooman yihiin dawlad ka dhalata dalka soomaaliya ee dagaalada sokeeye ay daashadeen soomaaliduna waxaa ay ka dhur sugayaan natiijadda kulankaasi waaba hadii uu suurta galee in uu qabsoomo.